Lo mhlaba uyamangalisa ngaphakathi nangaphandle, kwaye wonke umlinganiswa wokuqala kulo lonke ugciniwe ngelixa usenza ukuba usebenze kwaye unobunewunewu. Imigangatho yangaphambili yokhuni oluqinileyo yenziwe ngesanti entle kwaye yangcoliswa, ukhetho lwepeyinti lwatshintshwa ukuze luhambelane ngokuchanekileyo nemibala yokuqala kwigumbi ngalinye, iipariji zalungiswa ngokutsha kusetyenziswa amatye asele ekhona kwaye igadi ngaphambili yajikwa yaba yiyadi entle kunye nendawo yokuhlala.
Kumgangatho wokuqala uya kufumana ikhitshi entle enekhabhathi yesiko lama-Amish, isiqithi, kwaye yakhiwe ngezixhobo zombane zase-Itali ezibandakanya isitovu, i-oveni, i-microwave, ifriji, umatshini wokuhlamba izitya, umenzi wekofu, (Kuerig / drip combo) nokunye. Uya kufumanisa ukuba ifakwe kakuhle kwi-cookwaware, izinto zokupheka, kunye nokuphaka izitya ukulungiselela ipati yegadi egqibeleleyo. Ngaphandle kwekhitshi ligumbi lokutyela elinetafile entle yoBuyiselo lweHardware kunye neendawo zokuhlala ezi-6. I-buffet ibonisa izinto ezininzi zeglasi kunye ne-barware ye-cocktail oyithandayo okanye iglasi yewayini. Ngexesha leenyanga zasehlotyeni sicebisa i-mojito eyenziwe nge-mint entsha ukusuka kwi-patio yangasemva! Ngaphakathi kweholo uya kufumana igumbi lokuhlala kunye negumbi lokuhlala elisemthethweni. Igumbi lokuhlala linezinto ezininzi zokuhlala kunye neTV eneDishTV kunye neSmart TV. Iisofa ezimbini ezintle ze-navy velvet zasePottery Barn yindawo ekugxilwe kuyo kwigumbi lokuhlala elisesikweni elenza indawo entle yokuthomalalisa ngekomityi yekofu kunye nencwadi oyithandayo.
Nceda uqaphele: Ngokuqinisekileyo akukho maqela okanye imisitho. Iindwendwe ezingahlawuliyo azivumelekanga kwizakhiwo ngaphandle kokuba ubunayo imvume yangaphambili. Akukho ziqhushumbisi okanye umculo ongxolayo phantsi kwayo nayiphi na imeko (oku kuya kuzoyikisa iinkomo nto leyo enokuba yingozi kukhuseleko lwazo kwaye ibangele umonakalo wepropathi).